Deg Deg:-Midawga Yurub oo iskaga baxay Somaliland |
Deg Deg:-Midawga Yurub oo iskaga baxay Somaliland
Ururka Midowga Yurub ayaa albaabada u laabay xafiiskii uu ku lahaa magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland caasimada u ah.
Shaqaalihii xafiiskaasi ka howlgalaayay ayaa lagu amray in ay isaga soo baxaan degaanada ay ka howlgalayaan ee Somaliland.
Ilaa iyo hadda si rasmi uma cada waxa sababay in xafiiska EU ee Hargeysa la xiro iyo amarka shaqaalaha in ay ka baxaan Somaliland balse wasiirka arimaha dibada Maxamed Biixi Yoonis ayaa u sababeyey dhibaato dhaqaale awadeed.
Axsaabta Mucaaradka Somaliland ayaa sheegay in arimahaani ay ka dambeeyaan qadiyado dhinaca siyaasada ah sida waqti kordhinta loo sameeyay madaxda Somaliland taas oo qasabtay in ay Midowga Yurub go’aankaan qaataan.
Midowga Yurub waxa uu aad u tageraa xukuumada Somaliya waxana xafiiskoodi ugu weyn uu ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Midowga Yurub waxa ay qeyb ka tahay saxiibada Soomaaliya waxana kal hore ay maamulka Somaliland u sheegtay in aan la aqbali karin mudo kordhinta Madaxda Somaliland oo ay ka digeen qal qal siyaasadeed oo arintaasi ka dhalan karta.